लुम्बिनीमा प्रचण्ड–माधव समूह बलियो « Drishti News
लुम्बिनीमा प्रचण्ड–माधव समूह बलियो
Published On : 29 December, 2020
लुम्विनी, १४ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता कार्यकताहरू विभाजित भएका छन् । ओली, प्रचण्ड–माधव गुटले आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन जिल्ला–जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर तान्ने कामलाई तीव्र बनाएका छन् । लुम्विनीमा मध्यमार्गी नेताहरू कता लाग्ने भन्ने कुरामा अन्योलमा छन् ।
लुम्विनी प्रदेशमा ओली गुटमा माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू छन् भने दाहाल–माधव गुटमा त शीर्ष नेतृत्व संलग्न छ । ओली समूहले आफूलाई बलियो देखाउन बाटो बाटोबाट टिपेर केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति गरेपछि विवाद भएको छ । कतिपय नयाँ मनोनित केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा समेत दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एक दर्जन भन्दा बढीले ओली पक्षद्वारा थपिएको केन्द्रीय सदस्य पद त्यागेको नेता अनुप बरालले बताए ।
उनले अझै केही नेताहरूले पनि पद त्याग्ने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘विना सोधपुझ केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि विवाद हुने राजीनामा दिने मात्रै होइन, ओली समूहले आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएको छ ।’ उनले लुम्बिनी प्रदेश सभामा आफूहरू बलियो रहेकोले सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुने पनि दाबी गरेका छन् ।
यता ओली गुटले भने लुम्बिनी प्रदेशलाई सबैभन्दा बलियो जनाधार भएको क्षेत्र भएको बताएको छ । ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेलदेखि अर्को समूहबाट आएर मन्त्री बनेका प्रभावशाली नेता टोपबहादुर रायमाझीको क्षेत्र भएकोले लुम्बिनी प्रदेशमा आफूहरूको वहुमत रहेको समूहको दाबी छ । तर प्रदेश राजधानी दाङको भालुवाङ सार्ने निर्णयले महासचिव पौडेलको प्रभाव कम भएको छ । राजधानी सार्ने कुराले पौडेलप्रति व्यापक असन्तुष्टि छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका नेताहरू को कता ?
सोमप्रसाद पाण्डे –पाल्पा
गणेशमान पुन–रुकुम पूर्व
महामन्त्री विष्णु पौडेल–रुपन्देही
मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल–दाङ
टोप वहादुर रायमाझी–अर्घाखाची
हृदयेश त्रिपाठीको ओलीलाई समर्थन छ भने वामदेव गौतम अझै पार्टी एकताको पक्षमा भएकोले उनको गुट तटस्थ देखिन्छ ।
नेकपा औपचारिकरूपमा मात्र विभाजन हुन बाँकी रहँदा लुम्बिनीका प्रभावशाली नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहमा आफूलाई उभ्याइसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा धेरैजसो नेताहरू प्रचण्ड–माधव समूहमा छन् । जो ओली गुटमा छन्, तिनीहरु पदको लोभले गर्दा ओलीलाई समर्थन जनाउन बाध्य भएका हुन् । ओली गुटमा लाग्नेहरु लुम्विनी प्रदेशका विष्णु पौडेलले बाहेक अन्यले आगामी निर्वाचनमा जमानतसमेत जोगाउन सक्ने छैनन् ।
ओली समूहका विश्वास पात्र विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलदेखि दाहाल–नेपालका विश्वासपत्र वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल पनि यसै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । कुनै समूहमा नखुलेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि यसै प्रदेशका हुन् । यसले नेकपामा विभाजनपछि प्रदेशमा कुन समूहले ‘लिड’ गर्छ भन्ने निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रभावशाली नेताहरू दुई खेमामा विभाजित भइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली नेता एवं रूपन्देही (बुटवल)बाट निर्वाचित सांसद तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र हुन् । रूपन्देहीबाटै अर्का प्रभावशाली नेता घनश्याम भुसाल अर्को समूहमा छन् ।
आफ्नो क्षेत्रमा उनको पनि कम आंकलन गर्न हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै भुसाल दाहाल–नेपाल समूहमा रहे । गुल्मीमा दुई जना प्रभावशाली नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट छन् । ज्ञवाली ओली समूहमा र विष्ट दाहाल–नेपाल समूहमा छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई ओली समूहले पार्टी प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ता बनाइसकेको छ ।
दाङबाट ओली र प्रचण्डका नजिकका नेताहरू दुई खेमामा विभाजित छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओली र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा अर्को समूहमा छन् । महरा हालै राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्किएका छन् । महरा प्रतिनिधिसभा र पोखरेल सोही क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । पोखरेल नेकपा लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्ज पनि हुन् ।
पाल्पाबाट लगातार तीनपटक निर्वाचन जितेका पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे दाहाल–नेपाल समूहमा लागेका छन् भने पूर्वभूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर राना ओली समूहमा छन् । पाण्डे माधवकुमार नेपालका आफन्त पनि हुन् । नेकपाको गुटमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी घुलमिल भएपछि समस्या सिर्जना भएको हो । ओली गुटमा माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू मिसिएका छन् भने दाहाल–माधव गुटमा त शीर्ष नेतृत्व मिसिएको छ ।
कपिलवस्तुका दुई नेताहरू चक्रपाणि खनाल र बलराम अधिकारी दुई समूहमा लागेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार र पूर्वकृषिमन्त्री खनाल दाहाल–नेपाल र संविधानसभा सदस्य अधिकारी ओली समूहमा लागेका छन् ।
रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती दुवै दाहाल–नेपाल समूहमा छन् । नेकपा प्रदेश अध्यक्ष रहेकी घर्ती र पुन श्रीमान श्रीमती पनि हुन् । रोल्पामा प्रभावशाली धेरै नेता दाहाल–नेपाल समूहमा रहेकाले ओली समूह कमजोर देखिन्छ । रुकुम पूर्वका नेता पूर्वआपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन र पूर्वखेलकूद मन्त्री कमला रोका दाहाल–नेपाल समूहमा र नेकपा केन्द्रीय सदस्य खेममान खड्का ओली समूहमा लागेका छन् ।
कुनै समय एकीकृत माओवादी हुँदा बाबुराम भट्टराईका विश्वासपात्र अर्घाखाँचीका नेता टोपबहादुर रायमाझी माओवादी विभाजन भएपछि दाहाल निकट हुँदै नेकपा विभाजन हुँदा ओली समूहमा पुगेका छन् । पार्टीको सैद्धान्तिक पक्षमा दख्खल राख्ने नेकपाका पाका नेता वेदुराम भुसाल दाहाल–नेपाल समूहमा छन् । प्युठानका दाहाल निकट प्रभावशाली नेता मणि थापा ओलीतिर लागेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सभाका प्रभावशाली नेता कृष्णध्वज खड्का दाहाल निकट नेता हुन् । पश्चिम नवलरासीवाट संघीय सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी ओली समूहमा लागेका छन् ।
जिल्ला अध्यक्ष को कता ?
लुम्बिनी प्रदेशमा केपी गुटको पक्षमा पाँच जना छन् भने सात जना दाहाल–नेपाल पक्षमा छन् ।
रोल्पा : सुरेन्द्र घर्ती, दाहाल–नेपाल समूह
रुकुमपूर्व : मेघबहादुर श्रेष्ठ, दाहाल–नेपाल समूह
प्यूठान – तुलसीराम शर्मा, दाहाल–नेपाल समूह
नवलपरासी (पश्चिम) : भविश्वर तिवारी, दाहाल–नेपाल समूह
दाङ : टीकाराम खड्का, दाहाल–नेपाल समूह
बाँके : आईपी खरेल, दाहाल–नेपाल समूह
बर्दिया : भवनकुमार थारु, दाहाल–नेपाल समूह
रुपन्देही : शिवराज सुवेदी, ओली समूह
कपिलवस्तु : झविलाल पोख्रेल, ओली समूह
अर्घाखाँची : चेतनारायण आचार्य, ओली समूह
गुल्मी : मधुकृष्ण पन्त, ओली समूह
पाल्पा : नारायण आचार्य, ओली समूह